Translate Norwegian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Norwegian to Myanmar (Burmese), Norwegian to Myanmar (Burmese) translations, Norwegian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hei, hvordan har du det မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Er det noen? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Jeg elsker deg veldig mye ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Hvor mye koster denne hamburgeren? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Kan du ringe meg en taxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
jeg beklager ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Unnskyld meg တဆိတ်လောက်
jeg er interessert ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Flyet mitt ble forsinket အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Jeg er her for forretninger ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hei mitt navn er မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Jeg beklager, men jeg er gift ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Jeg vil gjerne spørre deg ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Kan du ta meg til flyplassen? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Hva er klokken akkurat nå, vær så snill? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Hvor er nærmeste politistasjon? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Kan jeg låne telefonladeren din, vennligst? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Kan du hjelpe meg? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Bestil meg en drink, vær så snill? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Hvor mye koster det? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Jeg er allergisk mot gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Kontakt lege ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Er det en lege? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Kan jeg ringe? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Ring meg sjefen din, vennligst. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Dette stedet er veldig hyggelig ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ta meg til hotellet, vær så snill ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Hva er mitt romnummer? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?